Ọgbọ eletrik Inc. Osote onye na-ahụ maka onye isi na ndị na-ahụ maka ọrụ ga-enweta ọrụ | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụỌgbọ eletrik Inc. General Directorate ga-eme ka ịzụta nke Assistant Inspector
Ọgbọ eletrik Inc. (EÜAŞ) General Directorate Assistant Inspector Entrance Exam. EUAS, dị ka akara KPSS ga-ekpebi ndị na-aga ime 200 ga-ekpebi mmadụ 10 na-enyocha ndị nyocha. Oge ekwesịrị itinye akwụkwọ maka ilelee ndị ọrụ a, ekwuputala ụbọchị atọ nke ọnwa Febụwarị 03.
Igwe eletriki eletriki eletrik Co. Inc. n’ime ndi ulo oru Energy na eke Resources. (EÜAŞ) General Directorate Assistant Inspector Entrance Exam ga-eme na Ankara, amalitere itinye akwụkwọ maka ule ahụ. Enwere ike ịme akwụkwọ anamachọ akwụkwọ maka elele ahụ rue onwa Febụwarị 3, 2020 kachasị ọhụrụ. Ndi akwukwo ndi choro itinye ha n ’iru ndi oru a nwere ike ime n’onwe ha ma obu site n’ozi ulo oru nke Ankara.
Ọnọdụ ndị chọrọ maka ntinye akwụkwọ ahụ kwuru na ọkwa ọkwa nke inlọ Ọrụ ahụ dị na Gazette bụ ndị a:
(1) I nweta akara PSS 2018 ma ọ bụ karịa site n’aka Nnyocha Nhọrọ Nhọrọ Ọha (KPSS) nke OSYM mere n’afọ 2019 ma ọ bụ n’afọ 48 ma soro n’etiti ndị mbụ 80 n’etiti ndị na-arịọ arịrịọ na-amalite site na akara kachasị elu (Nha nha anya) Bụrụ na ọnụ ọgụgụ ndị aga-aga ịnọ n'ahịrị nke ikpeazụ karịrị otu, aga-akpọ ndị niile chọrọ ime akara a ka ha bịa nyocha nke edere).
(2) Iji mezuo ọnọdụ izugbe edepụtara na Nkeji edemede 657 nke Civil Servants Iwu Nke 48.
(3) Agaghị abụ afọ 01 dị ka 01/2020/35 (01/01/1985 ma emesịa mụọ).
(4) I nyecha akwukwo site na akwukwo iwu, sayensi ndoro-ndoro ochichi, onodu aku na uba, ngalaba ochichi, akụnụba na ulo oru nke ulo akwukwo di elu na enye akwukwo iri-ano ma o bu site na ulo akwukwo ghota nzere ya.
(5) Agaghị etinye aka na ọrụ ndị agha dịka ụbọchị edere nwa akwụkwọ maka ule ụmụ nwoke.
(6) Enweghị nsogbu ahụike ọ bụla na-egbochi ha ịrụ ọrụ ha oge niile.
(7) Emebila ụlọ ọrụ ọ bụla na-abụghị EUAS.
(8) Inye akwụkwọ ndị achọrọ ya na akwụkwọ ndoro-ndoro gaa na adreesị akọwapụtara na “AP-ExAM APPLICATION”
Ebe na Oge Ọrụ:
(1) Akwụkwọ maka ntinye akwụkwọ ga-ebido na 14/01/2020 ma ga-akwụsị na 03/02/2020 na 17.00.
(2) A na-emeju akwụkwọ anamachọihe site na dejupụta akwụkwọ anamachọihe nke ebipụtara na weebụsaịtị nke General Directorate of EUAS (www.euas.gov.tr), yana akwụkwọ ndị ọzọ dị mkpa Ü EÜAŞ General Directorate Inspection Board Onye isi oche Nasuh Akar District Türkocağı Street No: 2 / F1 KLMN Block Floor: 5 Room no: 515 06520 Balgat-Çankaya / ANKARA ”na mmadụ ma ọ bụ na posta ya.
(3) Ngwa emere mgbe ụbọchị a gachara, ngwa ndị anabatagola ka ụbọchị a ruru na-egbu oge na akwụkwọ ozi agakwaghị atụle.
Isiokwu Okwu Mmalite Ule:
iwu ahụ; a) Iwu, b) Iwu mpụ (Akwukwo nke 1 nke Usoro Mpụ ahụ, “Iwu nile ;, Isi nke 2, Isi nke 2, çgha Mpụ megide Ngwongwo Ya Kitap, Isi nke 10, Isi nke 2 Iwu nke Oke Mmebi megide Trusttụkwasị Ọhaneze Obi ”, Nkebi nke 3, isi nke 4, çgha ndị metụtara nkwụsi ike na ịrụ ọrụ nke Ọha Ọha”, c) Iwu obodo (belụsọ Iwu Ezinaụlọ), ç) Iwu nke Ọrụ ("Iwu Iwu nke Ọrụ" Isionskpụrụ ụlọ na mgbazinye, Ọrụ, Ọrụ, Nkwekọrịta Surety),
d) Iwu Azụmaahịa (akụkụ "mbido" nke Usoro Azụmaahịa na akwụkwọ nke 1 akpọrọ "Commercial Enterprise ve and the 3book titled akpọtụrụ Negotiable Instruments), e) Iwu Iwu.
Economics; Theorykpụrụ akụ na ụba na amụma, ego, akụ, kredit, njikọ, ego mba, mmekọrịta mba ụwa na ụlọ ọrụ, njikwa azụmaahịa na njikwa ego, nsogbu akụ na ụba ugbu a.
ego; Fkpụrụ gbasara ego na usoro mmefu ego, ụkpụrụ nke usoro ụtụ isi Turkey na iwu, ụkpụrụ nke mmefu ọha na eze na mmefu ego, ụdị mmefu ego na ụdị mmefu ego, ụgwọ ọha.
Akaụntụ, Mgbakọ a) Nnukwu ego, b) Nchịkọta na usoro mpempe akwụkwọ, c) akaụntụ na ndekọ ọnụ ọgụgụ azụmahịa.
Asụsụ Bekee (Bekee, French, German).
Ebe Ule na Datebọchị:
(1) A ga-enyocha ule ederede nke Mahadum Ankara University Continuing Education Center (ANKÜSEM) na Satọde, 07/03/2020 n'etiti elekere 10:00 - 13.00 (minit 180) n'otu nnọkọ na Ankara. Onweghi onye ga-anabata ya n’ụlọ ahụ mgbe nkeji iri na ise mbụ gachara mmalite ule.
(2) daybọchị, oge na ebe ndị aga-aga ile ule ahụ ga-ekwupụtara na lık Akwụkwọ nke id ga-enyocha akwụkwọ ”.
(1) Ule nnabata ahụ nwere nkebi abụọ: udomo ede ede na nyocha nke ọnụ.
(2) A ga-eduzi ule ederede ahụ n'ọtụtụ nhọrọ (5-ahọrọ) usoro ule na naanị otu nhọrọ azịza ziri ezi. Azịza na-ezighi ezi agaghị emetụta azịza ndị ziri ezi.
(3) Agaghị akpọ ndị na-agabigaghị udomo oro ede maka nyocha ọnụ.
(4) Ngụcha akwụkwọ zuru oke n’ule edere na ede bụ 100 isi.
(5) N’ ule nyocha ahụ, a ga-ajụ ngụkọta nke ajụjụ 25, 125 bụ ndị sitere na ndị otu nyocha ọ bụla.
(6) Iji chee na ị ga-enwerịrị ihe ịga nke ọma n’ule edere, nyocha asụsụ asụsụ mba ọzọ ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị afọ 50, nke ọ bụla n’ime akara ule ndị e nwetara n’aka ndị ọzọ n’ule ugo ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị afọ 60, nkezi agaghịkwa erughị 65. A ga-akpọ ndị nkuzi iri abụọ mbụ ruru ogo akara ule dị n'etiti ndị na-aga nke ọma ịga akwụkwọ nyocha.
(7) Ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị iri abụọ ndị asambodo n'ihi na ha enwetala isi otu na elele edee, aga-akpọ ndị niile chọrọ akara a akara ule. Ndị ọzọ erughị eru maka nsonaazụ nyocha ederede.
(8) Ihe edere n’ule edere ede na aha ndị a ga-akpọ maka uhere a na-ekwupụta na ịntanetị na www.euas.gov.tr. Ndi akwukwo ndi tozuru oke iji ghari akwukwo a ka a na-egosi.
(9) A ga-eme nyocha ahụ site n’okwu dị iche iche nke nyocha. Na nyocha a na-ekwu okwu, a na-atụle ihe ọmụma nke ndị a na-aga ime n'ozuzu ya na àgwà onwe onye nke ndị chọrọ ime ihe dịka ọgụgụ isi, ọsọ nke mbufe, ike ikwupụta, omume na ngagharị.
(10) Iji chee na ị na-eme nke ọma na nyocha a na-ekwu okwu ọnụ, nkezi nke akara ule onye ọ bụla so na ule nyocha ahụ karịrị otu isi zuru ezu ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị isi 100.
(11) ọkwa uda ule; A na-agbakọ ya site na iwere nkezi nke akara ule na-agụ na nke onu.
(12) N’ime ihe ịga nke ọma a kpụrụ mgbe agbakọchara ọkwa ọkwa n'ọnụ ụzọ, ọ bụrụ na ọnụọgụ ndị ga-anọchi anya ndị ọnye ga - eweghara (ọ bụrụ na ọnụọgụ nke ndị gafere gafere mmadụ 10), ndị ahọrọ akara ule nnabata dị elu karịa. Maka ịha nhatanha nke akara ule ule, nwa akwukwo nwere akara mmụta asụsụ mba ọzọ ka mkpa. Ndị ọzọ erughị eru maka nsonaazụ nyocha.
(13) Ndị oghere mmeri ga-enyefe akwụkwọ mkpesa ha gbasara ajụjụ nyocha ederede na ntinye akwụkwọ nyocha ahụ na ndị isi oche nke Nnyocha EÜAŞ n'ime ụbọchị 3 ụbọchị site na ụbọchị nyocha. A ga-atụle ihe ndị anabatara mgbe ọ gwụsịrị oge a. A na-enyocha mkpesa n'ime ụbọchị ọrụ ise ma a na-amara ọkwa onye ahụ metụtara ederede. Nzere na nsonaazụ edere ede, ọkwa nke nsonaazụ ahụ, a na-ebugara ndị isi oche nyocha Nnyocha EÜAŞ akwụkwọ nyocha n'ime ụbọchị asaa ka ọkwa nke nsonaazụ ndị ahụ gasịrị. Ndị ọrụ nyocha ga-enyocha mkpesa niile n'ime ụbọchị iri na ise ma ọhụụ ma mee ka ndị edemede mara banyere ha.
(14) A ga-ekwupụta aha ndị gafere agafe ịbanye n’ule nyocha ịntanetị na www.euas.gov.tr, a na-emekwa ka amara ha.
Job: TÜDEMSAŞ onye nlekọta nlekọta
TCDD Transportation Inc. 9 ga-ewe onye nnyemaaka nnyemaaka
TCDD Transport Assistant Insightor mara ọkwa!
Ọkụ Egwuregwu Ọwa Mmiri. General Directorate
Ọgbọ eletrik Inc. Ntinye akwụkwọ nke onye na-ahụ maka nyocha onye isi ndị ọrụ